600 WAR CULUS:Khayre Ku dhawaaqay In Uu yahay Musharax Madaxwaynaha Somaliya | khaatumo news online
WAR CULUS:Khayre Ku dhawaaqay In Uu yahay Musharax Madaxwaynaha Somaliya
Sep 13, 2020 - Aragtiyood
Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa caawa si rasmi ah u shaaciyey inuu yahay musharax u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya.
Kheyre oo qoraalkan soo dhigay bartisa Twitter-ka waxa uu ku sheegay in mudadii uu hayey xilka ra’iisul wasaaraha dalka wax-badan uu qabtay waxna ka bartay.
“Bismillah, Walaalayaal, waxaan shaki ku jirin in labaatankii sano ee la soo dhaafay ay dawlanimadeennu hore u socotay, tallaabadeeduba ha gaabnaatee. Muddo xileedkii 5aad ee geeddi socodkaas, ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu soo adeegay mas’uuliyad Ra’iisul Wasaare. Xilkaas oo waxna lagu soo qabtay, Alle mahadii waxna laga soo bartay,” ayuu qoraalkiisa ku yiri Xasan Cali Kheyre.
Qoraalka Kheyre ayaa intaas ku sii daray, “Hadda oo la sugayo hannaan loogu gudbo muddo xileed cusub ee dowladda Soomaaliyeed, waxaan fikir iyo talo wadaag dheer kaddib halkan idinkula wadaagayaa musharaxnimadayda jagada Madaxwaynaha JFS.”
Waxa uu qoraalkiisa ku sheegay in uu fahamsanyahay fursadaha caqabadaha la xiriira hoggaaminta dalka, islamarkaana uu ku hoggaamin doono karti, hufnaan iyo daacadnimo, hadii uu ka noqdo madaxweyne.
“Anigoo si dhab ah u fahamsan fursadaha iyo caqabadaha la xiriira hoggaaminta iyo waxqabadka dalkeennu u baahan yahay maanta iyo mustaqbalkaba, waxaan mar kale isu soo qaddimayaa in aan dadkayga ugu adeego si ay ku dheehan tahay karti, hufnaan iyo daacadnimo,” ayuu yiri Xasan Cali Kheyre.
50-maalmood ayaa ka soo wareegatay markii xilka kulan buuq hareeyay looga qaaday Xasan Cali Kheyre, welina lama buuxin booskii uu ka baxay ee ra’iisul wasaaraha dalka.
Kheyre ayaa waxaa xilka ka qaaday baarlamanka 25-kii July, kadib markii ay isaga iyo madaxweyne Farmaajo isku qabteen arrimaha doorashada oo uu kaga soo horjeestay madaxweynaha, taasi oo keentay in Villa Somalia ay ka abaabusho mooshin.
Intii uu xilka hayey Kheyre, gaar ahaan muddooyinkii dambe, waxaa taageerayaasha madaxweynaha ay ku eedeyn jireen inuusan daacad u ahayn oo uu yahay musharax doonaya inuu xilka ka tuurto.